Ubuhlungu kancane, okuyinto eyenzeka emzimbeni, kubalulekile ukuhlaziya. Kwezinye izimo kubalulekile kudokotela. It kwenzeka kaningi impela ukuthi amathole kukhona okukhulu. Kulesi isifo okungenani kanye ezimpilweni zabo wahlupheka ngamunye. Nokho, izimbangela zezinkumbulo lezi emizweni ezingemnandi ahlukahlukene kakhulu.
Uma amathole kukhona sore ngemva egijima, kungaba nje impendulo ukucindezeleka ngokomzimba noma umsebenzi ongajwayelekile. Ubuhlungu kaningi kwenzeka ngisho nje lapho ehamba. izinhlungu ngiyaqaqanjelwa kanye sigameko e amathole ezibhekwa futhi umphumela ukuphila umzimba. Iqiniso liwukuthi uma umuntu ehlezi phansi, ukugeleza kwegazi iphazamisekile. Ngakho, kukhona engalulami wegazi, futhi ngenxa yalokho i-oksijini yokulamba imisipha, okuholela ekuqongeleleni ubuthi eziyingozi lapho.
Ngokuvamile, amathole izinyawo ubuhlungu, ngoba kukhona semithambo isifo, imisipha, amathambo, noma isimiso sezinzwa. Khona-ke, kubonakala sengathi imilenze ayesinda futhi kukhona zomile, ubuhlungu njalo. Lokhu kungaba:
Thrombophlebitis. isifo semithambo, okuyinto evame kakhulu phakathi abakhileyo emhlabeni. A uphawu lesi sifo singumbulali ubuhlungu amathole onesigqi uhlamvu. Nge eziya ziba zimbi lesi sifo ithole uqala evutha, okungadingi zinyamalale.
Isifo sokuqina kwemithambo yegazi - lena ngenye isifo lapho amathole kukhona okukhulu. Iqiniso liwukuthi kuleli cala kukhona uphawu eningi izindonga isitsha igazi. It kuvela ukuthi uma imisipha ithole ukwenza inkontileka. Ubuhlungu kwandisa ngesikhathi ukuhamba. Ukuze uqonde ukuthi inkinga e isifo sokuqina kwemithambo yegazi kungenzeka, uma izinyawo zihlale cool. Akunandaba ukuthi lokushisa umuntu noma emhlabeni.
izinkinga Emuva ezifana washelela disk, isibonelo, ngokuvamile avuse ubuhlungu. Baqala angayinikeza ukuze imilenze yakhe. Ngakho, amathole obukhulu. Nokho, akakaze ubuhlungu yomgogodla.
Izifo izinzwa, ikakhulukazi neuropathy. Lena - neuralgia. Ubuhlungu amathole ngesikhathi esifanayo kukhona ngezikhathi futhi zenzeka njengoba ukuhlaselwa futhi obuyohlala imizuzu eminingana.
amathole Ache e myositis. Kuyinto ukuvuvukala ukuthi yenzeka imisipha ithole. Lokhu ukugula okusuke kukubi kakhulu, ngakhoke kudinga yezokwelapha oyisibopho ukwelashwa. Myositis kwenzeka ngemva umkhuhlane, ukulimala ngezinyawo, noma uvivinye umzimba kakhulu iqembu imisipha ithole.
Osteomyelitis kuhambisana ubuhlungu eqinile futhi esikhundleni isikhathi eside e amathole. Isizathu salokhu iba ukutheleleka ngegciwane ithambo izicubu.
Amajaqamba nazo yokuthi ubuhlungu amathole. Lokhu kungase kube ngenxa ngokweqile imisipha ukukhathala. Lahla lokhu ubuhlungu kungaba silula. Engingakusho nje uphumule, ukushintsha isikhundla izinyawo, noma uvele usukume phezu abandayo.
Myopathy - esinye isizathu okungenzeka ubuhlungu bemisipha ithole. Lesi sifo kwenzeka ngenxa ukusetshenziswa kwezidakamizwa noma izifo odlule.
Ngoba noma yisiphi ubuhlungu ithole kufanele ngokushesha ubone udokotela. Uma kungenjalo, sizothinta indlela yokuphila njalo ulaka. Kunezindlela eziningana izinyathelo ukuthi kuzosiza ukuqeda ubuhlungu obunjalo.
Okokuqala, kubalulekile ukuba uvumele izinyawo ukuze baphumule. Mayelana izikhathi 2 ngosuku kuyadingeka ukubeka ogulayo amathole ice. Kuyinto efiselekayo hudula ingalo nge ngebhandeshi nokunwebeka. Futhi-ke, kudingeka njalo ukukhulisa izinyawo zakho i emashumini ambalwa imizuzu ngosuku.
Okwesibili, kokusisiza ukuba sibhekane nesimo ne umuthi wezinhlungu. Ethandwa kakhulu kuba "ibuprofen". Kodwa musa ahileleke izidakamizwa. Uma, ngemva kwezinsuku ezingu-7 ukuthatha imithi zingakutholi ungcono, kufanele uxhumane nodokotela.
Ekugcineni, ubuhlungu amathole kufanele ukushintsha indlela yakho yokuphila. ukwenqatshwa okuphoqelekile imikhuba emibi (utshwala nogwayi). Ally ezimweni eziningi kuyoba izicathulo esikahle futhi zikhululekile. Abesifazane kanye nesidingo give up High Heels. Kulokhu, imfundo ngokomzimba kufanele kugxile ukuqeqeshwa nelamathole.
Ukudideka: Izimpawu, Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Amatshe atholakala enyongweni nokwelashwa kwazo
Bubbles amanzi ezandleni - isimungumungwane, utwayi noma ...
Kuyini umkhawuko wesikhathi eYurophu nase indlela ukunquma isikhathi ukuthi kungakanani kukhona